XANUUNKA QUDBO-SIRADA IYO NIYADJABKEEDA IYO KHIYAAMADA RAGA | shumis.net
Home » galmada » XANUUNKA QUDBO-SIRADA IYO NIYADJABKEEDA IYO KHIYAAMADA RAGA
XANUUNKA QUDBO-SIRADA IYO NIYADJABKEEDA IYO KHIYAAMADA RAGA
waxaan ahay gabar dhalinyaro ah oo jirta 19 sano, waxaan dhiganayay fasalka 3aad ee dugsiga sare, maalin anigoo gurigayaga u socda ayaa waxaa isoo dabo galay wiil dhalinyaro ah oo da' ahaan ku qiyaasay 20 jir, wuu isalaamay, wuxuuna iga codsaday inaan siiyo telefoon lambarkeyga, waan udiiday, wuxuu igu celceliyey kalmado aad u jilicsan, markii aan gurigayaga ku dhawaa ayaan siiyey, habeenkiiba wuu isoo wacay, wuxuu ahaa wiil afmiinshaar ah, oo hadalka uu ku hadlayo u dhigma qof weyn, waxaa uuna iisoo bandhigay inaan isguursano, waxaan wada soconay xiriirkeena muddo 3 bilood ah, wuxuu igu qanciyey inaan isguursano oo isqarsano, waan ka diiday, laakiin wuxuu igu celcelinayay muddo asbuucyo ah, sheekooyin riyo oo kale ayuu igu kasbaday, oo ay ka mid ahayd, in marka aad iskuulka dhamayso ayaan ku aroosayaa oo guurkeena shaacinaynaa, waxaan ku qancay markii danbe fikradaas, waxaan ka fasax qaatay duhur Jimce ah waalidkey, waxaan u sheegay inaan aadayo gabar saaxiibtey ah oo xaafad fog degan, kadibna waxaan aaday meeshii aan ku ballanay wiilkii, waxaaba diyaar ahaa gaari yar oo cusub, oo darawal saaran yahay, waxaan aadnay safar aanan aqoon meel la i geynayo, waxaan soconay wado dheer ilaa aan ku qiyaasay 100 KM, waxaan tagnay meel geedo ah, waxay dirsadeen telefoon, waxaana kasoo baxay keyntii sadex nin oo mid Koofi iyo cimaamad wato, waxaan fariisanay geed har weyn, waxaana la bilaabay howshii meherka, waxaa la iweydiiyey " gabarey meherkaaga waa imisa? waxaan ku iri Kun dollar, waxaa la igu meheriyey meher aanan fahmin, waxaan ku soo noqonay wadadii dheereyd, xilli cishaha ka hor ayaan imaanay, waxaan filayay in gurigayagii la i geeyo, laakiin waxaa nala geeyey Hotel, qol horey loo diyaariyey ayaa nala geeyey, casho ayaan cunay, kadibna wuxuu soo jeediyey Caawa meeshan ayaan seexanaynaa, waan diiday, laakiin diidmadaydii ma sii socon, waxaan seexanay hotelkii, halkaas ayaa si sahlan ugu waayay gabarnimadaydii, waxaana ii baryay waa cusub, subaxdii waxaan xaafadayadii tagay anigoo isbedel la iga dareemayo, soo jeed badana iga muuqdo, waxaan asbuucyo kadib dareemay inaan xanuunsanayo, waxaan qaaday uur, waxaa iga shakiyey reerkayaga, waan sheegay inaan nin guursaday, dagaal iyo dhagahadal badan iyo jeesjees, waan ku sabray go'aankii khaldanaa oo aan qaatay, waxaase xanuunkii igu sii siyaaday, markii aan arkay wiilkii sheeko xariir ahaa oo telefoonkiisii dansan yahay, facebook giisiina wuu badelay, waxaa ii baryay waa kale, waxaan hada dhalay gabar yar, waxaan ka soo baxay umushii, sheeko xariir waa la helay, wuxuuna markii hore inkiray inaan isguursanay, kadib wiilkii gaariga waday oo markhaati ahaa ayaa runta sheegay, hase yeeshee, waxaa la iiga qaaday warqadaydii iyo meherkeygii,
waan ka xumahay inaan ustaad kugu dheereeyay sheekadayda, laakiin ii dulqaado, hada waxaan ku noolahay gurigayaga, waxaa isbedelay ixtiraamkii la ii hayay, wiilashii aan isku fasalka ahayna way igu sheekeystaan, marka waxaan doonayaa sidee uga baxaa mushkiladan aan lugahayga ku doontay?
waxaan doonayaa inaan ka gudbo oo aan horumar badan sameeyo, Ustaad Allaha ku sharfo ee i caawi, anigoo rajaynaya in gabdho badan igu cibro qaadan doonaan!!!!
waxaan marka hore kaaga mahadcelinayaa kalsoonidaada, su'aasha dheer iyo faahfaahintaada ma dhibsanayo, maxaa yeelay waxaa muhiim ii ah inaan fahano heerka ay ku taabatay mushkiladaan oo ah mida ugu badan ee dalkeena ka jirta, waana mid ay la kulmaan gabdho badan oo da'daada ah.
waxay ii saamaysay arintaadu si adag, sababtoo ah waxaa ii muuqatay wacyi la;aantaada ayaad god ugu dhacday, hase yeeshee waa wax kuu qornaa, mana awoodna inaan taariikhda dib u celino.
waxaa muhiim ah inaad qiratay khaladkaagii, waxa aad ku aragtay qoyskiina oo ah inay ka xumaadeen arintaada waa dhaqan caadi u ah dadkeena, laakiin waxaan la aqbali karin dhagahadalka iyo in lagu xaqiro, waa arin aan haboonayn, waxaase keenaya mustawaha aqoondaro ee bulshadeenu u leedahay arimahan oo kale, mana ahan inay kugu abuurto niyadjab, waa dadkaagii, waa kuu muhiim xiriirkoodu, laakiin waxaa adiga lagaa rabaa inaad dhaydo nabarkaas aad sida aan masuuliyadu ka muuqan u gashay.
raadka khatarta ah ee ay reebto qudbosiradu, waxaad uga baahan tahay inaad qaadato koorso tababar ah, oo kaa caawisa inaad ilowdo wixii ku soo maray.
waxaan kugu la talinayaa arimahaan:-
1- walaal samir oo dulqaado, ninkaas wuxuu ka faa'iidaystay jileecaaga, iyo wacyi la'aantaada, waxaadna ogaataa in muslim aan labo jeer god laga qaniinin.
2- ku noqo waxbarashaadii, oo dhamayso, oo ha uga cararin niyadjab, maxaa yeelay waa inaad kabtid noloshaada waxbarasho.
3- waalidkaa ka duceyso, oo caawi la shaqee, soona celi kalsooniday kugu qabeen, oo waa inay kaa muuqato dadaal badan.
4- diinta baro oo quraanka iyo xadiithka baro, oo dhagayso, oo dhaqangeli diinta.
5- akhlaaqdaada hagaaji, oo jooji xiriirada macno darada ah, sidii kii hore oo kale.
6- hadii guur laguu soo bandhigo, markasta reerkiina tixgeli inaad ogaato taladooda, maadaama aad horey uga tallaabsatay.
7- gabdhaha la furo, waxay mar kale si degdeg ah u qaataan guur degdeg ah, ka fiirso guurka labaad.
8- hadii aad awoodin, si toos ah noola soo xiriir, si aad u qaadato koorso tababar ah oo hogaaminta qoyska ku saabsan.
waxaan kuu rajaynayaa guul dhamaystiran.
Title: XANUUNKA QUDBO-SIRADA IYO NIYADJABKEEDA IYO KHIYAAMADA RAGA